Yambiro pamusoro yemagetsi skateboard kushandiswa uye kuchengeteka - Jomo Technology Co., Ltd
Yambiro pamusoro yemagetsi skateboard kushandiswa uye kuchengeteka
Kuti uderedze chero mhando ngozi, tinoratidza ukachenjerera kuteerera zvinotevera nyevero.
Shandisa KOOWHEEL Electric Longboard nenjere uye musoro.
KOOWHEEL Electric Skateboard munhu mhoro-zvose chokufambisa motokari, asi ayo sizvo uye kukodzera kushandiswa kunogona kukonzera kukuvara.
Nguva dzose vanopfeka bhutsu, nenguwani uye zvakakodzera kuchengeteka michina yakadai mabvi Mapedhi, kugokora Mapedhi uye chiningoningo zvisungo. Kushandisa zvakasimba buckled kuita mutserendende muchando ngowani kuti anotidzivirira cranial inokurudzirwa.
Usashandisa pasina kurovedza zvakakodzera; tapota verenga bhuku pamberi kushandiswa. Zvikasadaro, unogona kurasikirwa kudzora motokari uye kuwa.
Ishandiswe yevana pasi pemakore 16 hakubvumidzwi. Adult cherechedzo inodiwa kushandiswa yevana pasi 16.
Pregnant vakadzi uye vanhu vakaremara havafaniri kushandisa motokari iyi.
Usashandisa KOOWHEEL LONGBOARD pasi vakadhakwa, zvinodhaka kana zvimwe zvinhu kuti aigona kuchinja rokushandisa hunenge.
Nyatsoteerera dzakapoteredza zvinhu kana uchityaira. Kuchengeta yakanaka maonero nzvimbo inoshandiswa hunokosha varambe kuzvidzora.
Tinoratidza akapfeka rokunyaradza nguo panguva kushandiswa.
KOOWHEEL LONGBOARD yakagadzirwa kutakura kana mumwe chete. Use nevanhu vakawanda panguva imwe chete hakubvumidzwi.
Tinoratidza musingamuoni pakarepo kana payakakurudzirwa mhanyisa kana kumisa motokari; Maitiro aya angaita kuti kuzvidzora.
Check KOOWHEEL yemagetsi skateboard hoverboard pamberi kushandiswa.
Kuita Nokuraramisa pashure kushandiswa.
Usashandisa murima kana nomwenje aibvira munzvimbo.
Iva nechokwadi kutyaira nokukurumidza nguva dzose achibvumira njodzi paimira chero nguva uye chero mamiriro ezvinhu.
Tinoratidza uine yakakodzera kuchengeteka kure nemamwe motokari kana uchityaira.
Regai vanokwira pamusoro kana vari kumhanya, musi terrains kuti vari gogonera kana mawere chaizvo dzakatenuka.
Regai isa simbi kana unopinza zvinhu pamusoro bhodhi.
Usashandisa thinners kana zvokufembedzwa okuchenesa kungosunda sikuta zvikamu.
Regai kuponjesa kana kubvisa chinhu KOOWHEEL LONGBOARD epurasitiki chikamu.
Dzidza zvose zvishoma nezvishoma, kusanganisira mazano matsva. Kana iwe paunotaura wakatsiga usamirira kusvikira ukawira - kuwana kure uye kutanga zvakare. Tanga pamusoro zvinyoronyoro dzakatenuka. Next, kune materu apo nokukurumidza achibvumira iwe kuti kubvisa bhodhi pasina kudonha.
The kupfuura kukuvara kunokonzerwa kuita mutserendende muchando bhodhi kushandiswa uri pfupa mitswe, saka kutanga kudzidza kuwira (achiumburuka kana zvichibvira) pasina kuita mutserendende muchando bhodhi.
Beginners vane kuita mutserendende muchando mapuranga vanofanira kuedza shamwari kana mubereki. Ruzhinji tsaona paitika rokutanga romwedzi kushandiswa.
Asati zvichidzika KOOWHEEL LONGBOARD cheki apo unogona kupedzisira nekuti unogona kutsikwa kana kukuvadza vanhu pedyo.
Join kirabhu omunharaunda uye kudzidza zvakawanda. Ratidza uri achiputa motokari zvakanaka uye teererai iwe nevamwe vanhu.
IVAI NECHOKWADI THE bhatiri anonyatsovimba mhosva PAMBERI SHANDISA.
KOOWHEEL LONGBOARD CHINOTARISIRWA Vaine zvemagetsi zvinoriumba pasi Board. NDAPOTA TEVEDZERA MIRAYIRIDZO pazasi kuti asakuvadza KUTI.
Post nguva: Jan-10-2018